आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ? | Public 24Khabar
Home Lifestyle आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज साताको छैटौँ दिन अर्थात शुक्रबार सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। आज प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले बढेर सुन प्रतितोला ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको छ। हिजो तेजावी सुन प्रतितोला ९३ हजार ४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ११ सय ९५ रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला ११ सय ८० रुपैयाँमा कोरोबार भएको थियो।
Previous articleदक्षिण कोरियाका १५ लाख श्रमिकले तलब पाएनन्
Next articleएक्कासी भारतीय सैनि/कमाथि ड’रलाग्दो आक्र’मण, दिल्लीमा खैला/बैला, निक्कै ठुलो क्ष’ति !